Health – santhit.com
“တစ်ပြား တစ်ချပ်မှ မကုန်ဘဲ ကျောက်ကပ် ရောဂါ ပျောက်နည်း”
“တစ်ပြား တစ်ချပ်မှ မကုန်ဘဲ ကျောက်ကပ် ရောဂါ ပျောက်နည်း” ကျောက်ကပ် ရောဂါနဲ့ ပါတ်သက်လို့ စိတ်ညစ် နေကြ သလား။ ငွေတစ်ပြား တစ်ချပ်မှ မကုန် စေရဘဲ ပျောက်ကင်း စေရမယ်။ စိတ်ချ လက်ချနဲ့ ယုံယုံ ကြည်ကြည် သောက်ကြည့် လိုက်စမ်းပါ။ ပြောင်းဖူးက ထွက်တဲ့ အမွှေး ကို သွေခြောက်အောင် အခြောက် ခံပြီး လ္ဘက်ခြောက် လိုမျိုး ရေနွေးထဲ ခပ်သောက်ပါ။ ဒိဌ ပျောက်ကင်း ပါသည်။ သွေ့ခြောက် =…
Khant Hein March 4, 2018 Health No Comments
ငုံးဥ၏ ကျန်းမာရေး အစွမ်း . ငုံးဥကိုတော့ မသိတဲ့ လူဆိုတာ ရှားပါတယ်။ဒါပေမယ့် ငုံးဥထဲမှာ ဆိုရင် ဘယ်လို အာဟာရများစွာ ပါဝင်တာကိုတော့ သိတဲ့သူ ရှားပါးပါလိမ့်မယ်။ . ငုံးဥထဲမှာ ပါတဲ့ အာဟာရ တန်းဖိုးဟာ ဆိုရင် ကြက်ဥ နှစ်လုံးစာနဲ့ ညီမျှတယ် ဆိုတာကော သိကြ ပါသလား။ ငုံးဥဟာ လူ့ရဲ့ အဆုတ်နဲ့ သရက်ရွက်ကို အားကောင်း စေပါတယ်။ . ငုံးဥကို စားသုံးသင့်တဲ့ သူတွေကတော့ ကလေးတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ သွေးအားနည်းတဲ့…
Khant Hein March 1, 2018 Health No Comments
“ကွမ်းဂျိုးကိုငွေမကုန်ပဲ ဖယ်ရှားမယ်” ======================== ဒီနေ့တော့ကွမ်းယာအစားများတဲ့ အမျိုးတွေအတွက်ဆေးနည်းလေးတစ်လက် ပြောပြချင်ပါတယ်…။ ကွမ်းယာအစားများပြီး ကွမ်းဂျိုးတက်နေပါက အောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်ပါ…။ ဖရဲသီးမှ အဖြူသားအနည်းငယ်ကိုယူပါ….။ ရေ (ရေနွေးကြမ်းခွက်)… တစ်ခွက် နှင့်အတူဆူပွက်အောင်ပြုတ်လိုက်ပါ…။ထိုရေကိုအနည်းငယ်အအေးထားပြီးသောက်ပါ..။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ..ကွမ်းဂျိုးများဆီးနှင့်အတူပါလာပါလိမ့်မည်…။တစ်ပတ်…နှစ်ကြိမ်ခန့်။ ထိုရေကိုခဏခန့်(၁၀)မိနစ်ခန့် ငုံထားပြီး သွားတိုက်ပါက သွားများရှိ ကွမ်းဂျိုးများပျောက်သွားပါလိမ့်မည်..။ တစ်ပတ်လောက်ထိုကဲ့သို့အသုံးပြုကြည့်ပါ..။တစ်နေ့….(၂)ကြိမ်ခန့်….. ကွမ်းစားတဲ့သူ​တွေတွက်​​တော့တကယ်​​ ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတခုရှိတယ်​​နော်​..ကွမ်းဂျိုး​တွေကိုဖယ်​ရှားနိုင်​ပါတယ်​…။ ဖရဲသီး​ပေါ်ရံကအဖြူ သား​တွေကို..ကွမ်းတယာစားတာ​လောက်​ကြာ​အောင်​ဝါးပြီးငုံထားလိုက်​ပါ ။ပြီးရင်​သွားတိုက်လိုက်​ပါ..အနည်းဆုံး၃ရက်​မှ၇ရက်​​လောင်​ထိလုပ်​ကြည့်​ပါ။ လုံးဝလုံးဝသွာများမှာကွမ်းဂျိုး​တွေကိုဖယ်​ရှားသွားပါလိုက်​မယ်​…။ကျွန်​​တော်​လက်​​တွေ့အသုံးပြု​ ​နေတာပါ…..(Naing Moe) ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်းပြောပြပေးသော အကိုရင်မောင်နှင့် ဆေးနည်းမျှဝေပေးသော ကိုနိုင်မိုးတို့အား အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်..။ မည်သူမဆိုစိတ်ချမ်းသာစွာ ကူးယူခြင်း…
Khant Hein February 28, 2018 Health No Comments
“နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းခြင်း ၊ကျယ်ခြင်းအတွက် မြန်မာ့ဆေးနည်းစွမ်းများ”
“နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းခြင်း ၊ကျယ်ခြင်းအတွက် မြန်မာ့ဆေးနည်းစွမ်းများ” နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ လုံးဝ ပြန်မဖြစ်စေနိုင်တော့သော ကိုယ်တွေ့ ဆေးနည်းကောင်းတစ်လက် ကျွန်တော်နှလုံးရောဂါ ပြင်းထန်စွာခံစားရချိန် ကျွန်တော်နေထိုင်ရာ ပုသိမ်မြို့ရှိ ပုသိမ်ဆေးရုံကြီးနှင့် ဇီဝကအထူးကုဆေးခန်းတို့တွင် တက်ရောက်ကုသခဲ့ရာ ဆေးစစ်ချက်အရ နှလုံးသွေးကြောသုံးချောင်းကျဉ်းနေပြီး တစ်ချောင်းမှာ ကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်တော့သော ကြောင့် နှလုံးစက်ထည့်ရမည့် အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်မှ ကျွန်တော့်လို ခွဲစိပ်ခါနီးလူနာတစ်ဦး မခွဲစိပ်ရပဲ သက်သာ ပျောက်ကင်းသွားသည်ဆိုသော ဆေးနည်းကိုပေးသဖြင့် ရန်ကုန်၌ ဆေးကုသခံရန်ပြင်ဆင်နေချိန် တွင် ခုနှစ်ရက်မျှ ဆက်တိုက်သောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရန်ကုန်အာရှတော်ဝင်…
Khant Hein February 27, 2018 Health No Comments
“အသက် ၉၀ ဆယ်ကျော် အဖိုးတယောက့်ရဲ အလွယ်ကူဆုံးနဲ ကျန်းမာရေးဒေါင်ဒေါင်မြည်တဲ့ ဆေးနည်း”
“အသက် ၉၀ ဆယ်ကျော် အဖိုးတယောက့်ရဲ အလွယ်ကူဆုံးနဲ ကျန်းမာရေးဒေါင်ဒေါင်မြည်တဲ့ ဆေးနည်း” ” အသက်” လေးရယ်ရှည်စေလို မန်းတောင်ရိပ်ခိုတဲ့ အဲဒါသီချင်းပါ တကယ်မဟုတ်ပါဘူး တကယ်က ဒီလိုပါ။ ငှက်ပျောဖီးကြမ်း အမှည့်ကို အခွန်ပါအပါ ရေစင်အောင်ဆေး လိုက်ပါ။ ပြီရင် ဓား ထက်ထက်နဲ သင်တော်သလောက် ခပ်ပါးပါးလှီးပါ။ နေပူမှာ ဖန်ရုံလေးလှမ်းပီး မြေအိုး အသစ်ထည်းကို စီပီထည်ပါ။ ပြီးသွားရင်တော့ ပျားရည် စစ်စစ်ကို ထိုလှီးထည့်ထားသော ငှက်ပျောသီးအဖတ်လေးတွေအပေါ် မြုတ်တဲအထိ လောင်းထည့်ပြီး အဖုံးလုံအောင် ပြန်ပိတ်ပြီးထားပါ။ တပတ်လောက်…
Khant Hein February 26, 2018 Health No Comments
“အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် သွေးကင်ဆာ တကယ်ပျောက်ခဲ့သူ”
“အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် သွေးကင်ဆာ တကယ်ပျောက်ခဲ့သူ” လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်က ကောလင်းမြို့နယ် ဘန့်ဘွေးကုန်း ရွာကလေးမှာနေထိုင်ခဲ့စဉ် သွေးကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရ သော မောင်ဇော်အောင် တို့ မိသားစုနှင့် ရင်းနှီးခင်မင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်က မောင်ဇော်အောင် မှာ တစ်ပတ်လျှင် သွေး ၃ ပုလင်း သွင်း၍ အသက်ဆက်နေရသောအချိန်ဖြစ်ရာ တစ်ရွာလုံးက သေမည်ဟုသတ်မှတ်ထားကြ၏ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုလည်း အလုပ်အကိုင်အခြေအနေအရ ထိုရွာမှ ထီးချိုင့်မြို့ ထီးချိုင့်မှ ကသာမြို့ သို့ ပြောင်းရွှေ့အခြေ ချနေထိုင်ခဲ့သည်မှာ ၁၀ နှစ်ခန့် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး…
Khant Hein February 20, 2018 Health No Comments
ထိပ်ကပ်နာ လက်တွေ့ အရှင်းပျောက်ဆေးနည်းး
ထိပ်ကပ်နာ လက်တွေ့ အရှင်းပျောက်ဆေးနည်းး မြန်မာ့ ဆေးနည်း တွေကို အထင်သေးလို့မရပါဘူး.ယခု ကျမ ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ ပျောက်ကင်း သက်သာ သွား တဲ့ ဆေးနည်းလေးအကြောင်းကို မျှဝေ ပေးမလို့ပါ…ထိပ်ကပ်နာ ရောဂါ ဖြစ်နေတာ ငါးနှစ်လောက်ရှိပါပီ.,ဆရာဝန် တွေ နဲ့လည်းပြတယ်..ဓာတ်မှန်လည်းရိုက်ရတယ်…ဆေးပေါင်းစုံလည်းစားရတယ်..မသက်သာဘူး.,.ထိပ်ကပ်နာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတော့..နှာခေါင်းထဲ မှာ ရှိတဲ့ အညစ် အကြေး တွေက အပြင်မထွက်ပဲ အထဲမှာစု ပီးတော့ အနာ ဖြစ်နေတာ ပြည်တည်နေတာပေါ့..နှာခေါင်းက အမြဲလိုလို ပိတ်နေတယ်ပေါ့နော်..အထဲမှာ ပြည်တည်ပီးတော့ အဲ ပြည်တွေက နှဖူး…
“ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်သူများ ဆီးလမ်းကြောင်းကျောက်တည်သူများအတွက် မြန်မာ့ဆေးနည်း”
“ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်သူများ ဆီးလမ်းကြောင်းကျောက်တည် သူများအတွက် မြန်မာ့ဆေးနည်း” ဓါတ်ပုံမှာပါတဲ့ဆေးပင်ကလေးဟာ လမ်းဘေး သို့မဟုတ် ကွင်းပြင်တွေမှာပေါက်ရောက်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအပင်လေးကိုဟင်းနုနွယ်ဆူးပေါက်လို့ဆေးပညာစသင်ပေးခဲ့တဲ့အဖိုးကပြောပြပါတယ်။ သည်အပင်လေးဟာ ဟင်းနုနွယ်မျိုးနွယ်ပါပဲ ဒါပေမဲ့သူရဲ့ထူးခြားချက်ကဆူးကလေးတွေပါနေတာပါ။ ကျနော့ကိုဆေးပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ကျနော့အမေရဲ့အဖေကျနော့အဖိုးဟာ ဆီးပူဆီးအောင့်ဆီးသွေးပါ ဆီးကျောက်တည်တဲ့လူနာတွေတွေ့တိုင်း သည်ဟင်းနုနွယ်ဆူးပေါက်ပင်တစ်ပင်လုံးကို ရေနဲ့သန့်စင်အောင်ဆေးပြီးဓါးနဲ့နုတ်နုတ်စင်းကာ ရေကိုရေဖလားတစ်ခွက်ခန့်ထည့်ပြီးအိုးတစ်လုံးနဲ့ကျိုပါတယ်။ ဆေးပြုတ်ရည်အဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တာပါ။ ပြုတ်ရည်ရပြီဆိုရင်အအေးခံပြီး ပြုတ်ရည်မှာသကြားခပ်ကာ လူနာကိုသောက်နိုင်သလောက်နည်းနည်းချင်းစတိုက်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းလည်း ဟင်းနုနွယ်ဆူးပေါက်အပင်သစ်နဲ့ကြိုသောက်ခိုင်းပါတယ်။ ထိုအခါလူနာမှာကျောက်ကြောင့်အောင့်ခြင်း ကိုက်ခြင်းနာခြင်းများသက်သာ၍ကျောက်များထွက်ကျလာပါတော့သည်။ ကျောက်သေးရင်တော့ အမှုန့်ဖြစ်ကာပျော်ကျစေပါတယ်။ဆီးအိမ်ကျောက်ကပ်ဘယ်နေရာမှာပဲကျောက်ရှိရှိသည်ဆေးပင်လေးကပျောက်ကင်းအောင်အစွမ်းထက်ကုသနိုင်ပါကြောင်း အဖိုးပေးခဲ့သောဆေးနည်းအားစေတနာဖြင့်လက်ဆင့်ကမ်းပါသည်။ Credit Nay MinLay(မြန်မာ့ဆေးပညာ ၁/ရန်ကုန်) Unicode “ကြောကျကပျကြောကျတညျသူမြား ဆီးလမျးကွောငျးကြောကျတညျ သူမြားအတှကျ မွနျမာ့ဆေးနညျး” ဓါတျပုံမှာပါတဲ့ဆေးပငျကလေးဟာ လမျးဘေး…
“လည်ပင်းကြီးရောဂါ လက်တွေ့ပျောက်ခဲ့သူ” ============================= လည်ပင်းကြီးရောဂါ… တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာတာ၅နှစ်ရှိပြီဟု ပြောပါသည်။ မန္တလေးမြို့စိန်ပန်းရပ်မှဖြစ်ပါသည်။သူ့လည်ပင်းမှအဖုကိုပြပါသည်။အင်္ဂလိပ်ဆေးလည်းနေ့စဉ်စားနေပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားဖြစ်၍.စစ်ကိုင်းသီတဂူဆေးရုံသို့သွားပြသည်..ပေးသည့်ဆေးကိုနေ့စဉ်တစ်ကြိမ်စားရသည်ဟုဆိုသည်။ဆေးကလည်းဈေးမကြီးပါ။ စားခဲ့တာတစ်နှစ်ကျော်။သိပ်လည်းမထူးခြားအနည်းငယ်ပိုကြီးလာသည်ထင်သည်ဟုဆိုသည်။ အဘယ့်ကြောင့်တိုင်းရင်းဆေးခန်းလာပြရသလဲ..မေးကြည့်သောအခါ..ဆရာ့ဆေးခန်းကဆေးနဲ့ပျောက်သွားတဲ့အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့လို့ဟုပြောသည်။ ဆရာကလည်ပင်းကြီးမကုဖူးပါဟုပြောသည်။ ပျောက်သူအဒေါ်ကြီးကကိုယ်တိုင်ပြောသည်။ဆရာပေးတဲ့ဆးမြစ်နဲ့ပျောက်သည်ဟုပြောပာတယ်…။စစ်ကိုင်းနယ်ဖက်မှဖြစ်သည်။ ဒူးနာ၍မန္တလေးဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင်တည်းကုရန်အမျိုးဘုန်းကြီးကခေါ်ကုပေးခြင်းဖြစ်သည် ဆရာ့ထံတွင်ကုသရင်းရောဂါမှာဒူးနာဖြစ်သော်လည်း..တောရွာများတွင်ဖြစ်လေ့ရှိပြီးကုသလေ့မရှိကြသော.လည်ပင်းကြီးဖြစ်နေသည်ကိုဆရာကတွေ့သဖြင့်..ပျောက်လိုပျောက်ငြားလိမ်းကြည့်ပါဟုဆေးမြစ်ကလေးပေးလိုက်ပါသည်။ကျားမနိုင်ဆေးမြစ်ဟုခေါ်ပါသည်။လည်ပင်းတွင်လိမ်းရာသက်သာပြီးအသက်ရှူကောင်းလာသဖြင့်ရေရှည်နေ့စဉ်လိမ်းပါသည်။ ရွှေစာရံဘုရားပွဲတွင်ဆရာပေးလိုက်သည့်ဆေးမြစ်မျိုးရောင်းသည်ကိုတွေ့သဖြင့်များများဝယ်ထားပြီးဆက်လိမ်းပါသည်။အကုန်အစင်ပျောက်သွားပြီဟုမဆိုနိုင်သော်လည်း.သူ့လည်ပင်းမှာကြည့်ပျော်ရှုပျော်အနေအထားသို့ရောက်လာကြောင်းပြောပြ၍လာပြသည်ဟုပြောပါသည်။ထိုအဒေါ်ကြီးညွှန်၍ဆေးခန်းလာပြသည်ဟုပြောပါသည်။ အိုင်အိုဒင်းဓာတ်ချို့တဲ့၍ဖြစ်သည်ဟုဆိုသောလည်ပင်းကြီးရောဂါမှာ..ပင်လယ်နှင့်ဝေးသောအရပ်ဒေသများတွင်အဖြစ်များပါသည်။ ကျားမနိုင်သည်နွယ်ပင်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ထက်ပိုင်းဖြတ်လိုက်သောအခါထိပ်တွင်.ကျားခြေရာကဲ့သို့ပုံပါသဖြင့်ကျားမနိုင်ဆေးနွယ်မြစ်ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရွှေစာရံဘုရားပွဲတွင်တောထွက်တောင်ထွက်ဆေးပင်ဆေးမြစ်ရောင်းချသူများက..ရိုးရာဆေးအသုံးအဖြစ် မျက်စိနာလျှင်သွေးကွင်းနိုင်သည်။၀က်ခြံဖုများပျောက်သည်။အပူဖု အကျိတ်များကြေသည်။အအေးဆေးမြစ်ဖြစ်သည်..အပူမလောင်ပါ။အရောင်ကျစေသည်.သက်တံ့နာကိုပင်နိုင်သည်။ အပြင်ထွက်သည့်လိပ်ခေါင်းကိုပင်သွေးလိမ်းလျှင်ပျောက်သည်ဟုပြောရောင်းကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အနောက်တိုင်းဆေးနှင့်ပင်တစ်သက်လုံးဆေးစားရမည့် အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့လည်ပင်းကြီးရောဂါအတွက်.တန်ဘိုးမကြီးသောရိုးရာဆေးနည်းတိုဖြင့်.မပျောက်သည့်တိုင်.သက်သာပြီးကြည့်ပျော်ရှုပျော်ဖြစ်သွားသည်ဆိုလျှင် တင်ပြရသည့်အတွက်..ကုသိုလ်ရမည်ထင်ပါသည်။ ကြည်လွင်မြင့်(မုဒြာ) Unicode “လညျပငျးကွီးရောဂါ လကျတှပြေ့ောကျခဲ့သူ” ============================= လညျပငျးကွီးရောဂါ… တဖွညျးဖွညျး ကွီးလာတာ၅နှဈရှိပွီဟု ပွောပါသညျ။ မန်တလေးမွို့စိနျပနျးရပျမှဖွဈပါသညျ။သူ့လညျပငျးမှအဖုကိုပွပါသညျ။အင်ျဂလိပျဆေးလညျးနစေ့ဉျစားနပေါသညျ။ လကျလုပျလကျစားဖွဈ၍.စဈကိုငျးသီတဂူဆေးရုံသို့သှားပွသညျ..ပေးသညျ့ဆေးကိုနစေ့ဉျတဈကွိမျစားရသညျဟုဆိုသညျ။ဆေးကလညျးဈေးမကွီးပါ။ စားခဲ့တာတဈနှဈကြျော။သိပျလညျးမထူးခွားအနညျးငယျပိုကွီးလာသညျထငျသညျဟုဆိုသညျ။ အဘယျ့ကွောငျ့တိုငျးရငျးဆေးခနျးလာပွရသလဲ..မေးကွညျ့သောအခါ..ဆရာ့ဆေးခနျးကဆေးနဲ့ပြောကျသှားတဲ့အဒျေါကွီးတဈယောကျနဲ့တှခေဲ့လို့ဟုပွောသညျ။ ဆရာကလညျပငျးကွီးမကုဖူးပါဟုပွောသညျ။ ပြောကျသူအဒျေါကွီးကကိုယျတိုငျပွောသညျ။ဆရာပေးတဲ့ဆးမွဈနဲ့ပြောကျသညျဟုပွောပာတယျ…။စဈကိုငျးနယျဖကျမှဖွဈသညျ။…
Khant Hein February 19, 2018 Health No Comments
“လိပ်ခေါင်းအပြင်အနည်းငယ်ထွက်နေတာ ဘာလိမ်းရမလဲမေးသူအတွက်” ကျားမနိုင်(နွယ်)သွေးလိမ်းပါ။ အအေးလိုင်းဖြစ်ပါသည်။မပူမစပ်ပါ။ ရွှေစာရံဘုရားပွဲတွင်ရောင်းပါသည်။(ပြင်ဦးလွင်သို့အတက် မန္တလေးမှအထွက်။တပေါင်းလတွင်ဘုရားပွဲရှိပါသည်) ပရဆေးဆိုင်များတွင်လည်းမှာလျှင်ရပါသည် ။ ဝက်ခြံဖုထွက်လျှင်လည်းလိမ်းပါ။နုလျှင်ပျောက်။ရင့်လျှင်ပေါက်ပါသည်။ လိပ်ခေါင်း။ဂရင်ဂျီနာ။ ပြင်ပမှသွေးလိမ်းပေးရုံသာ။ ရေနွေးတွင်..၀မ်နုတ်သည့်ဆားခါးထည့်ဖျော်ပါ။အင်တုံသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ဇလုံ..ဖင်ထိုင်နိုင်သည့်အရွယ်ဝယ်ပြီးဖန်ထိုင်ပေးလျှင်လိပ်ခေါင်းပြန်ဝင်ပါသည်။ မ၀င်ပဲကျန်နေသည့်အသားပိုကို..ကျားမနိုင်သွေးလိမ်းပါ။လက်တွေ့ပျောက်ကင်းသူများစွာရှိပါသည်။ ဆရာကြည်လွင်မြင့် (မုဒြာ) Unicode “လိပျခေါငျးအပွငျအနညျးငယျထှကျနတော ဘာလိမျးရမလဲမေးသူအတှကျ” ကြားမနိုငျ(နှယျ)သှေးလိမျးပါ။ အအေးလိုငျးဖွဈပါသညျ။မပူမစပျပါ။ ရှစောရံဘုရားပှဲတှငျရောငျးပါသညျ။(ပွငျဦးလှငျသို့အတကျ မန်တလေးမှအထှကျ။တပေါငျးလတှငျဘုရားပှဲရှိပါသညျ) ပရဆေးဆိုငျမြားတှငျလညျးမှာလြှငျရပါသညျ ။ ဝကျခွံဖုထှကျလြှငျလညျးလိမျးပါ။နုလြှငျပြောကျ။ရငျ့လြှငျပေါကျပါသညျ။ လိပျခေါငျး။ဂရငျဂြီနာ။ ပွငျပမှသှေးလိမျးပေးရုံသာ။ ရနှေေးတှငျ..ဝမျနုတျသညျ့ဆားခါးထညျ့ဖြျောပါ။အငျတုံသို့မဟုတျပလပျစတဈဇလုံ..ဖငျထိုငျနိုငျသညျ့အရှယျဝယျပွီးဖနျထိုငျပေးလြှငျလိပျခေါငျးပွနျဝငျပါသညျ။ မဝငျပဲကနျြနသေညျ့အသားပိုကို..ကြားမနိုငျသှေးလိမျးပါ။လကျတှပြေ့ောကျကငျးသူမြားစှာရှိပါသညျ။ ဆရာကွညျလှငျမွငျ့ (မုဒွာ)